ADDIS ABABA- Kadib markii dalka Ethiopia booqasho ku tagey dhaxal sugaha Abu Dhabi ahna ku xigeenka taliyaha ciidamada dalka Imaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed ayaa waxaa heshiis hurumarineed oo qiimaihiisu yahay 3 billion ugu deeqey dalkaas.
Warsaxafadeed kasoo baxay wakaalada wararka dalka Isu-taga Imaraadka Carabta “WAM” ayaa lagu sheegey in sanduuqa hurumarinta Abu Dhabi ( ADFD) 3 billion dollar ku bixin dooono sidii dowlada Ethiopia looga caawin lahaa hurumarinta arimaha bulshada iyo dhaqaalaha.
Maalgalintaan ayaa ahaan doonta labo waji sida uu sheegey agaasima guud ee ADFD Mohammed Saif Al Suwaidi. 1billion dollar oo toos loogu shubo Bangiga Dowlada Ethiopia “ National Bank of Ethiopia” taas oo wadankaan ka caawini doonta dhibaatada ka haysata lacagaha adag. Lacagta hartey ( 2 billion dollar) waxay dalkaas ka cawineysa dhinacyada dhaqalaha iyo maalgalinta.
Munaasabada lagu saxiixey heshiiskaan ayaa waxaa goob joog ahaa dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ahna ku xigeenka ciidamada dalka Imaraadka iyo Ra’isal wasaraha Ethiopia.
Maalgalintaan ayaa sidoo kale madaxda dalka Imaraadka ku sheegtey iney dhiirigalineyso ganacsatada UAE iney maalgalin ku sameystaan dalka Ethiopia.
Dhinaca kale booqashada dhaxal sugaha Abu Dhabi ee Ethiopia ayaa ku soo beegmeysa xilli uu xun yahay xiriirka u dhexeeya Villa Somalia iyo Imaraadka Carabta.
Xiriirka isku soo dhowaadey ee Ethiopia iyo Imaraadka Carabta ayaa waxaa uu wax ka badalayaa siyaasada geeska Africa oo ay ku hardamaan wadamada Khaliijka.
Dalka Ethiopia ayaa kamid ah wadamada ciidamada ugu badan ka joogaan kuwasoo dagaalo kula jira kooxda Al Shabaab.
Dowlada Madaxweyne Farmaajo oo sheegtey in Khilaafka u dhexeeya wadamada Khaliijka ka tahay dhexdhexad ayaa waxaa siyaasad ahaan aad ugu dhowdahay dowlada Qadar.
Hoos ka akhri warsaxafadeedka wakaalada wararka Imaaraadka Carabta “WAM” kasoo saartey heshiiskaan oo ku qoran afka Ingriiska.
BU DHABI, (WAM) – Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), the leading national entity for development aid, allocated an AED11 billion (US$3 billion) economic aid package to the Ethiopian government to support sustainable socio-economic development in that country.
Sucuudiga oo xiligaan lagu gudo jiro gudashadii Xajka ayaa boqor Salman waxaa uu qaabilaad....
Madaxweyne Gaas oo booqanaya xerada ciidamada Badda Puntland
Puntland 15.04.2018. 07:05